Gantaalka cusub ee Kuuriyada Waqooyi ma wuxuu farriin u dirayaa Biden? |
Kuuriyada Waqooyi ayaa daaha ka qaadday gantaal cusub oo badda hoosteeda ka dusa, warbaahinta dowladda ayaa ku tilmaantay “hubka ugu awoodda badan dunida”.
Dhowr gantaallada ka mid ah ayaa lagu soo bandhigay dhoollatus milatari oo uu goobjoog ka ahaa Kim Jong-un, sida ay shaacisay warbaahinta.
Muujinta awoodda milatariga ayaa ku soo aadaya maalmo kahor caleema saarka Joe Biden oo noqonaya madaxweynaha Mareykanka.
Waxay sidoo kale daba socotaa kulan siyaasaded oo dhif ah kaas oo Mr Kim uu ku sheegay in Mareykanka uu yahay “cadowga ugu weyn” dalkiisa.
Sawirro ay soo bandhigeen warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaya ugu yaraan afar gantaallo waaweyn oo caddaan iyo madow isugu jira.
Dadka arrimahan falanqeeya ayaa sheegay inuu yahay hub aan hore loo arkin. “Sanad cusub, Pukguksong cusub,” ayuu barta Twitter-ka ku soo qoray khabiir u dhashay Kuuriyada Waqooyi oo lagu magacaabo Ankit Panda, isagoo adeegsanaya magaca Kuuriyada Waqooyi looga yaqaanno gantaallada badda hoosteeda mara.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo dhoolla caddeynaya xilli uu daawanayay soo bandhigidda gantaalka
Arrintan oo shalay dhacday laguma soo darin gantaalkii ugu weynaa ee qaaradaha isaga gudba ee Kuuriyada Waqooyi, kaas oo lagu soo bandhigay dhoollatus kan ka weynaa oo la qabtay bishii October.
Soo bandhigiddan ugu dambeysa ee hubka ayaa imaaneysa dhammaadka shan sano oo uu talada hayay Xisbiga Shaqaalaha.
Khudbad uu toddobaadkii hore u jeediyay xubnaha xisbiga, ayuu Mr Kim wuxuu ku codsaday ballaarinta hubka nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi, isagoo hoosta ka xarriiqay noocyo hub ah oo uu door bidayo sida gantaallada riddada dheer ee laga gani karo dhulka iyo badda.
Wuxuu sidoo kale sheegay in Mareykanka uu “caqabadda ugu weyn” ku yahay horumarka Pyongyang … micno ma sameyneyso cidda talada haysa, dabeecaddiisa dhabta ah ee ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi weligeed isma beddeleyso”.
Intii uu Mr Kim xilka hayay Kuuriyada Waqooyi waxay horumar ballaaran ka sameysay barnaamijka hubka, oo ay sheegtay inuu muhiim u yahay inay nafteeda kaga difaacdo qabsashada Mareykanka.
Gantaalka cusub ee daaha laga qaaday ayaa u muuqda mid farriin loogu dirayo maamulka Biden, sida ay qabaan khubarrada.